IZITAYILE ZE-51 ZOMTSHATO ZEENWELE EZINDE EZIJONGEKA ZIKHULU NGAPHANDLE OKANYE NGAPHANDLE - IMPILO ENTLE
Eyona Impilo Entle Izitayile ze-51 zoMtshato zeenwele ezinde ezingezoMoya oVulekileyo kuphela
Izitayile ze-51 zoMtshato zeenwele ezinde ezingezoMoya oVulekileyo kuphela
Ngaphandle kwesigqubuthelo. UMARIYA ICOSTA IFOTOGRAFI, UKAMI OLAVARRIA: UMFOTO, ZHA ZHA PHOTOGRAPHY
Ukuhlaziywa ngoJan 21, 2021
Ukuba uneenwele ezinde, unokwenza imbonakalo yesigidi eyahlukileyo . Okwangoku, kulula ukoyiswa kukhetho kwaye uzinze kwisimbo sokubhala. Ukukunceda ukhethe olona suku lokugqibela lokwenza, siqokelele iinwele zomtshato ezingama-51 zeenwele ezinde ezisebenza kunye okanye ngaphandle kwesigqubuthelo. Nokuba ufuna ukugungqisa uhlaziyo olunamandla okanye amaza othando, sikugubungele. Khangela kuzo zonke iindlela ezikhoyo kwaye wabelane nabantu obathandayo kunye neenwele zakho. Baza kusebenzisana nawe ukwenza inkangeleko kwakhona ngendlela esebenza ngcono ngeenwele zakho. Ngapha koko, ukuba ukrazukile kwesiphi isitayile sokugungqa ngomhla omkhulu, baya kunika uluvo lwabo lobuchwephesha. Ukulungele ukubonisa ukhiye wakho omde? Nazi iinwele zomtshato ezingama-51 zeenwele ezinde esizithandayo.
Izitayela zeenwele zomtshato zeenwele ezinde ngaphandle kwesigqubuthelo
Kwi-Knot, sikholelwa ekwenzeni ezakho izithethe zomtshato. Ukuba awuyithandi imbono yokugungqa isigqubuthelo kumtshato wakho, awunyanzelekanga. Jonga iinwele zethu zomtshato esizithandayo ngeenwele ezinde (ngaphandle kwesigqubuthelo), ngezantsi.
Izitayela zeenwele zomtshato zeenwele ezinde: Phantsi UMFANEKISO WE-GRICEL
Isiteshi esidala-Hollywood ubukhazikhazi ngosuku lwakho lomtshato ngee-curls ezingaphezulu, ezibukhali.
ukuba wenzeni ngezambatho ezindala zomtshato
INGELOSI PATRICIA UMFOTO
Nantsi i-on-trend, iinwele zomtshato ezilula zeenwele ezinde esizithandayo. Gungqisa ubume bakho bendalo kwaye ungeze kwizikhonkwane zeenwele kumacala eetempile zakho.
IFOTOGRAFI YETRIKA YETRIKA
Yahlula iinwele zakho kwelinye icala lenwele entle yomtshato weenwele ezinde.
IFOTOGRAFI ENGOKUQINISEKISA YABANTU
Akukho nto iphosakeleyo ngamaza akhululekileyo! Cinga ngale nto 'yenzele ukungazami ukuphola ngemini yakho yomtshato. (I-Psst: Musa ukulibala i-hairspray!)
UMARY COSTA IFOTO
Umhla wakho womtshato ujongeka kufuneka ubonakalise ukuba ungubani. Ukuba oko kuthetha ukuba i-neon-color tresses, yiya kuyo! Yindlela yokuyila yokubeka owakho ujikelezo kwii-curls ezilula.
IFOTOGRAFI YEKHAYA LEHEATHER
Ukubiza bonke abatshakazi abancinci. Nantsi inwele elula yomtshato yeenwele ezinde: ii-locks ezimdaka nezithe nkqo.
I-K & CO. UMFANEKISO
Ukutshintsha isigqubuthelo sentloko. Yindlela elula yokongeza ubukhazikhazi kwimini yakho yomtshato.
Uhlobo lweHall-Up lweenwele zeenwele ezinde
Yongeza ukuthungwa kwizinwele eziqhelekileyo ezinesiqingatha ngokuluka kwibhodi entle.
UGARRETT RICHARDSON UMFANEKISO
Thatha inyathelo elinye ukuya phambili ngokukhupha isiqingatha sakho sokuluka 'wenze ngeentyatyambo ezintsha.
NGOKWENZA IOSOTALUNO IFOTOGRAFI
Ngokuchukumisa okungacacanga kokuqaqamba, yongeza into entle entloko ngasemva kwesitayile sakho sokuphakama.
Iifoto zikaChristina SERVIN
Ukukhangela iinwele zomtshato zakudala zeenwele ezinde? Iliwa elinomthi othambileyo entloko ngaphezulu kwenkangeleko yakho.
UKAMI OLAVARRIA: UMFOTO
Yama kwisitayile sakho se-boho ngokubeka into enentloko entsonkothileyo ngaphezulu kwesitayile sakho esilula sokuphakama.
FITZ CARLILE UMFANEKISO
Ukuphupha i-retro yomtshato weenwele ezinde? Slick isiqingatha esiphezulu seenwele zakho phezulu kwaye uhambe ngeklasikhi, esikolweni esidala.
Gweba iziqwenga zangaphambili zeenwele zakho ngasemva kwentloko yakho ngobuhle, iinwele zomtshato ezilula zeenwele ezinde.
ALISON D UMFANEKISO
Ukhangele ukujonga kwakhona? Zikhethele ngokukhululekileyo iinwele zakho ukuze ubenesiqhelo somtshato opholileyo olungele iinwele ezinde.
Umtshato we-Updo weenwele zeenwele ezinde
Cwangcisa iinwele zakho zibuyele kwi-ponytail esezantsi yolungiso lweentsuku zomtshato ezingayi kukunika nayiphi na ingxaki ngelixa uphantsi komgangatho wokudanisa.
BONPHOTAGE UBUGCISA OBULUNGILEYO BEFOTO YOBUGCISA
Ukukhangela iinwele zomtshato ezi-iinwele ezinde? Gqwetha iinwele zakho zibuyele kwisilumko esimangalisayo saseFransi okanye i-fishtail braid.
HANNAH COCHRAN UMFANEKISO
Siyayithanda i-chignon yeklasikhi kuba idibana kakuhle kunye naluphi na uhlobo lweentamo, ixesha okanye isitayile.
unyaka omnye ezantsi ngonaphakade
ULAURA ANNE WATSON
Buza isitayile sakho sokuteketisa iinwele zakho kwisithsaba sentloko yakho. Umthamo ongezelelweyo uya kongeza idrama kwiklasikhi yeklasikhi.
Iifoto zeLisa BOGGS
I-chignon esecaleni ecaleni yoyilo, ukuthandana okuthandwayo kwisitayile esiqhelekileyo.
ASHLEY I-GOODWIN PHOTOGRAPHY
Nxiba uboya obulula ngokuluka iintyatyambo kunye nobucwebe.
Kukho isizathu sokuba i-ponytails ziinwele ezithandwayo zomtshato zeenwele ezinde. Ziyaphola ngokungakhathali, kwaye zigcina imane yakho ebusweni bakho. Phezulu iponi ephezulu enentloko yentloko enobuhle, ukujonga okwangoku.
A.J. UMFANEKISO WOKUQHUBA
Umtshato wakho umalunga nawe. Phezulu ibhondi yakho esezantsi ngesihloko sendabuko somtshato womntu owenzelwe wena.
CAITLIN ALOHILANI UMFANEKISO
Ukuba uhlala uqaqambisa amatye okanye ufumene iibhokisi zomthi wakho womtshato, olu lusuku lomtshato olulula iinwele ezinde. Songela ii-tresses zakho ukuya kwiqhina eliphezulu kwaye ukhuseleke nge-elastics.
Hlaziya i-classic ballerina bun ngokubeka phezulu kwentloko yakho. Iqhina eliphezulu le-chic liya kuhamba kakuhle nangaliphi na ixesha okanye isitayile.
I-MECCA GAMBLE IFOTOGRAFI
Coca iinwele zakho zibuyele kwi-ponytail emangazayo ukuze ujongeke kwaye ujongeke.
IFOTO YENYANGA YASELWANDLE
Phezulu ibhin yakho ephezulu ngesihloko esifana nesihloko esikwisihloko somtshato wasebukhosini ogqibeleleyo kwizinwele ezinde.
UJENN MANOR UMFOTO
Uhlaziyo lomtshato akufuneki lube loluphambili kwaye luchanekile. Kwimeko kwinqaku: le bun, intle, ibuyileyo ibuyile ebumdaka.
Yongeza iintyatyambo eziqaqambileyo kuhlaziyo lwakho oluphantsi ngombala ohlekisayo wombala.
Bonisa ubuntu bakho nge-ponytail emangazayo. Siyayithanda le ndlela kuba ikuvumela ukuba ubonise ubuhle bakho bendalo.
Iinwele zoMtshato zeNwele ezinde ezinesigqubuthelo
Ukuba uzimisele ukunxiba isigqubuthelo ngelixa utshintsha izifungo, sikugubungele. Nazi iinwele zomtshato ezingama-20 zeenwele ezinde eziya kujongeka zimangalisa ngesigqubuthelo.
Uhlaziyo lomtshato kunye nesigqubuthelo
UDani Toscano Ukufota
Kukho isizathu sokuba ii-chignons zithandwa kangaka. Ukudityaniswa nesigqubuthelo, bajongeka becocekile kwaye beklasikhi. Ncamathisela isigqubuthelo sakho ngaphezulu kokujija kwakho ukuze ujongeke ngaphandle komthungo.
Ukuze ube mhle, i-bohemian vibe, shiya iziqwenga zobuso ozigqume kwisikhuselo sakho.
Ewe, unganxiba isigqubuthelo ngetopknot. Khangela i-headpiece enesigqubuthelo esiqhotyoshelwe kuyo, njengale ntyatyambo enhle.
Gcwalisa isigqubuthelo sakho ngesihloko esimangalisayo.
nini ukugcina imihla iphume
Yenza isigqubuthelo esihle ngaphezulu kwephonyile yakho ephezulu ye-chic, ukujonga okwangoku.
UJESSICA BELLINGER UMFANEKISO
Yenza i-stylist yakho yenze isithsaba se-Dutch braid kwaye ucofe isigqubuthelo ngaphakathi kwizinwele zomtshato ezithandanayo ngeenwele ezinde.
UJENNY FUTOGRAPHY UMFOTO WOMTSHATO NYC
Isikhuselo siya kongeza isixa esifanelekileyo sepolishi kwindawo encinci, emdaka.
Dlala ngezinto ezifakwayo ngokubeka isigqubuthelo se-lacy ngaphezulu kohlaziyo olucekeceke ngee-braids.
UMFANEKISO KESHA LAMBERT
Ukukhangela iinwele ezimnandi zosuku lomtshato ngeenwele ezinde? Coca iinwele zakho ubuyele kwi-bun ephantsi, kwaye emva koko wongeze kwi-accessory yeenwele kunye nesigqubuthelo se-tulle esilula.
CARRIE SWAILS UMFANEKISO
Bonisa uhlaziyo oluhle olujijekileyo ngokucofa ikhuselo lakho ngaphantsi.
USTEPHANIE YONCE UMFANEKISO
Yenza i-stylist yakho yongeze i-braids kwi-chignon yakho ukuze ijikeleze okutsha kwiklasikhi. Yongeza isigqubuthelo esifutshane sokwakha iinwele zomtshato ezisezantsi.
Hlanganisa iinwele zakho kwi-bun entle esezantsi, kodwa shiya iziqwenga ezimbalwa ngaphambili. Emva koko yongeza kwi-barrette ekhanyayo kunye nesigqubuthelo se-wispy, isithandwa sezinwele zomtshato.
Izinwele Zomtshato ezantsi Ngekhuselo
Phonsa icala elinye leenwele zakho kwicala elincinci, elinobuqili eliza kwenza ukuba usuku lwakho lomtshato lube neenwele ngokukhawuleza.
Bonisa ubude bakho ngee curls ezikhululekileyo. Faka isigqubuthelo sakho ngaphantsi kwesithsaba sakho ukuze singoyisi isimbo.
Kwinwele yanamhlanje, entsha, iliwa eliyinxalenye esembindini ngamaza akho. Beka isigqubuthelo sakho phezulu kwentloko yakho ukuthoba isitayile.
UKUNIKEZA UMFANEKISO WOMTHI
Kwi-vibe yeklasikhi, nxiba iinwele zakho phantsi kodwa uzikhuphe emva kweendlebe zakho. Yongeza isigqubuthelo ngaphezulu ngenkangeleko ecekeceke ngokugqibeleleyo.
Isiqingatha-sokuPhakamisa iiNwele zeNtsimbi Ngekhuselo
USHAUNA NOJORDON PHOTOGRAPHY
Nantsi inwele yomtshato yeenwele ezinde ngqo ngaphandle kwentsomi. Ncamathisela isiqingatha esiphambili se curls zakho umva kwaye ubeke isigqubuthelo sakho apho la macala mabini adibana khona.
Ukujonga okwangoku, tyibilikisa izilayidi zeenwele zakho zibuyele kwiinwele ezixineneyo.
Usengagungqisa isigqubuthelo sentloko kunye nesigqubuthelo sakho ngaphakathi. Beka isiqwenga seenwele ezibengezelayo kwelinye icala lentloko uze ubeke isigqubuthelo ngasemva kwentloko yakho ukuze ukhazimle, ukuthandana.
IFREELAND PHOTOGRAPHY-IBHASO WINA WINNING & HALL OF FAME!
Yongeza ivolumu kwizinwele zakho ezinesiqingatha ngokubeka isigqubuthelo phezulu ukuya kwisithsaba sentloko yakho. Iya kongeza umda omdaka kwizinwele zakho ezintle.
imiphezulu yeetafile eziphathekayo
ithetha ntoni [x]
Umama wengubo yomtshato yomtshato waselwandle